Nabdoon Xaarin ?xilligan Puntland waxay rabtaa debacsanaan iyo tanaasulaad dheeraad ah? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 15, 2013 2:56 b 0
Galkacayo, December 14, 2013 – Qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka Puntland ayaa weli ku celcelinaya in la xaliyo khilaafka u dhexeeya musharixiinta u tartamaya jagada sare ee Puntland iyo weliba maamulka talada haya.
Nabadoon Cabdicasiis Aw yuusuf Xaarin oo ka mid ah waxgaradka Puntland oo maanta la hadlay daljir, waxaa uu ku baaqay in la sameeyo tanaasulaad, isagoo khatar ku tilmaamay khilaafka u dhexeeya musharixiinta iyo maamulka.
Nabadoon Xaarin waxaa uu xusay in hadii khilaafku sii socdo ay wax badan xumaanayaan, waxaa uu taas bedelkeeda sheegay inay muhiim tahay dabacsanaan iyo tanaasulaad dheeraad ah in la sameeyo wakhtiga kala guurka ah ee lagu jiro.
?doorkii isimada ee arrimahan oo kale waa mid meesha ka maqan, waan dhaliilayaa arrintaas waa muhiim in isimada waa wayn ay xiligan qaadaan talaabo macquul ah.? Ayuu yiri Nabadoon Xaarin oo dhaliil u jeediyey isimada iyo kaalintooda.
Musharixiinta iyo madaxweynaha ayaa dhowaan la filayaa inay ka shiraan arrimo badan oo la isku hayo, tartamayaasha ayaa shalay ku dhawaaqay inay muhiim tahay in madaxweynuhu uu shaqada ka joojiyo guddiga Ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee uu magcaabay.
Dallada urrurada bulshada rayidka ah ee PUNSAA oo horay uga hadashay khilaafka u dhexeeya musharixiinta iyo maamulka ayaa ku baaqday in xal buuxa lagu gaaro wada-hadal iyo isu tanaasul dheeraad ah, si loo hagaajiyo wax badan oo dhib u dhac abuuri kara
Dhegeyso: – Jaamac Cabdiraxmaan oo daljir ka tirsan ayaa waraystay nabadoon Cabdicasiis Xaarin
Ciidamada dowladda oo u abaabulan hab beeleed oo maanta ku dagaalamay Jannaale (Dhegeyso)